Ukulala okungu-16 - Uhambo Olufushane Oluya Ebhishi/EGulf Place/Dining
Santa Rosa Beach, Florida, i-United States
Yenza leli khaya elibanzi libe yiholide lakho elilandelayo! Eduze kukho konke! Uhambo olufushane oluya ezindaweni zokudlela eziningi, izindawo ezimbili zokufinyelela ogwini, nokuningi! Le ndlu inamagumbi okulala amane kanye negumbi elingaphansi elilala izivakashi eziyi-16 ohambweni lwakho olulandelayo lomndeni. I-Gulf Place Town Center iwuhambo olufushane futhi inikezela ngobuciko bendawo, ukuyothenga, izindawo zokudlela, umculo obukhoma, u-ayisikhilimu noswidi, nokuqashwa kwamabhayisikili. Ukufinyelela ebhishi lase-Gulf View Heights kuwuhambo lwamaminithi angu-5 kuphela futhi kungenye ehamba phambili ku-30A!...Futhi ukude kuphela amamayela angu-0.2 ukusuka ku-Longleaf Pine Trailhead!
Siyakwamukela ku-Beach Landing ku-30A! Lena indawo ekahle yolwandle yokubaleka engaphansi kwemayela elilodwa ukusuka ogwini lwesihlabathi esimhlophe eGulf of Mexico.
Isitezi esingaphansi sinombono ovulekile onesofa elikhulu, 75" TV, itafula elikhulu lasekhishini elinebha ende nezihlalo ezinhlanu. Ikhaya lifakwe ophahleni abade nokhuni oluqinile kulo lonke. Inekhishi elihlome kahle elinesitayela se-Keurig (kanye nejwayelekile ) umenzi wekhofi, uhhafu wokugeza ngaphandle kwendawo yokuhlala eyinhloko, kanye negumbi lokulala eliphakeme esitezi esikhulu esinombhede olingana nenkosi kanye negumbi lokugezela likanokusho.Isitezi sesibili izikebhe ikamelo lesibili eliwubungcweti elinendawo yokugeza yangasese. Inekamelo lokulala elengeziwe eline umbhede wendlovukazi, kanye nelinye igumbi lokulala elifakwe kuvulandi wangasese kanye nemibhede yezindlovukazi ezimbili. Isitezi esiphezulu sinenye futhi indawo yokugeza egcwele, kanye negumbi lokuhlala eligcwele elinemibhede emibili yezingane! Igumbi ngalinye line-TV ehlakaniphile elungele wena sebenzisa izinhlelo zakho zokusebenza zokusakaza eziyintandokazi.
Sihlinzeka ngeziqalisi zokuqala zephepha lasendlini yangasese, amathawula ephepha, insipho yesandla, izitsha zokugeza izitsha, izingodo zokuwasha kanye nezikhwama zikadoti ukuze ufinyelele emahoreni akho okuqala angama-24. Sincoma ukuthi ulethe noma uthenge amathawula ephepha engeziwe, iphepha lasendlini yangasese, izikhwama zikadoti, amanabukeni, izinongo, izinongo, uketshezi lokugeza izitsha, insipho yokuwasha, ama-coffe pods noma izihlungi zekhofi (sinakho kokubili), amathawula olwandle, nanoma yini enye ongayidinga ngesikhathi sakho sokuvakasha. .
I-Master Bedroom: I-King Bed ne-Private Bath (ilala 2)
Igumbi lokuhlala elinosofa Omkhulu
I-Master Bedroom: I-Queen Bed ene-Private Bathroom (ilala 2)
Igumbi lokulala: I-Queen Bed (ulala 2)
Igumbi lokulala: Imibhede emibili ka-Queen kanye ne-balcony yangasese (ulala 4)
Igumbi lokulala le-Bunk: Imibhede Emibili Yezitaki Ezintathu (ulala 6)
Ukugeza Okugcwele ekupheleni kwehholo
Leli khaya liyikhilomitha elilodwa ukusuka eGulf Place. Njengoba kutholakala izinyathelo ezimbalwa ukusuka esihlabathini esimhlophe esimhlophe esidumile kanye namanzi aluhlaza e-Emerald Coast ehlonishwayo eNyakatho-ntshonalanga Florida, umphakathi omibalabala wase-Gulf Place ungomunye wentuthuko entsha yasemadolobheni yase-30A. Umphakathi wamahektha angu-25 utholakala enhliziyweni ye-Santa Rosa Beach ekhoneni lika-30A kanye no-393. I-Gulf Place yayiklanyelwe ngokuqondile ukwehlisa abantu ngemigwaqo emihle enezihlahla zesundu, imigwaqo ebanzi, amavulandi angaphandle anezambulela ezinkulu, izindlela zokuhamba zemvelo. , inala yezikhala eziluhlaza kanye nenqwaba yamabhentshi epaki ukuze uhlale futhi ujabulele ukubukwa. Okwenza i-Gulf Place ihluke kuzo zonke ezinye izindawo ezihlala eSouth Walton yingxubevange yezakhamizi zesikhathi esigcwele kanye nabavakashi besikhashana ababuthana lapha ukuze bajabulele ubuciko bangempela, ukuyothenga kwezitolo, ukudla kwasendaweni, umculo ophilayo kanye nomoya opholile.
Hlola ezinye izinketho ezise- Santa Rosa Beach namaphethelo